Takaitran’ny “Coup d’Etat” nataon-dRajoelina-Efa tafarina tsikelikely 8 taona aty aoriana -
AccueilRaharaham-pirenenaTakaitran’ny “Coup d’Etat” nataon-dRajoelina-Efa tafarina tsikelikely 8 taona aty aoriana
18/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fery goavana tena nandoaka ny toekarena malagasy no takaitra navelan’ilay fanonganam-panjakana nataon-dRajoelina Andry , valo taona lasa izay. Mitsingerina tokoa mantsy ny datin’ny 17 Marsa 2009, izay nampidoboka an’i Madagasikara tany anaty lavaky ny tsy fanarahan-dalàna na “anticonstitutionnelle”.
Andro talata io andro tamin’izany ary tamin’io no nandrombahan-dRajoelina Andry ny fahefana, ka nananganana ny Fitondrana Avo momba ny Tetezamita na ny FAT. Nanomboka teo no nilatsaka tany anaty lavaka mangitsokitsoka ity Nosy ity. Nitombo ny tsy an’asa, nitombo ny mpitaingin-tamboho, nikatona ny orinasa afaka haba maro noho ny sazin’ny iraisam-pirenena, ary ny tena loza dia nilatsaka teo ambony lohan’i Madagasikara ny sazin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena.
Nanao izay ho afany mba tsy hahatongavana amin’ny fanonganam-panjakana ireo masoivoho vahiny tamin’io andron’ny 17 Marsa 2009 io ka niala nenina nifampiresaka tao amin’ny Episkopa Antanimena ihany saingy herisetra sy bontolo no hitan’ny masony, ka nanjary nanamafy ny tatitra henjana hanamelohana an’i Madagasikara indray no nataony. Na i Andry Rajoelina izay nanao ny fanonganam-panjakana mivantana, na Ravalomanana Marc tsy nanaiky ny fanarahan-dalàna tamin’ny famindram-pahefana dia samy tompon’andraikitra tamin’io krizy nampilatsaka ny toekaren’i Madagasikara io avokoa. Nihemotra tany amin’ny laharana farany indrindra i Madagasikara nanomboka teo amin’io datin’ny 17 Marsa 2009 io ka fandrobana ny harem-pirenena toa ny fanondranana an-tsokosoko andramena no nahazo vahana. Eran’ny tanàna kosa dia nisy ny “Fis” na ny herim-pamoretana manokana notarihin’ny kolonely Lylyson, ka izay mianakendry manohintohina ny Fitondrana FAT, eny fa na haino aman-jery toy ny “Fréquence Plus” aza dia nahita faisana.
Ny fanarenana an’ireny lesoka samihafa ireny no asa goavana niandry an’izao fitondrana izao ary io efa hiara-mahita io ny fivoaran’izany. Efa manomboka tafarina ny firenena amin’izao fitondran’i Hery Rajaonarimampianina izao. Efa tafaverina eo anivon’ny fahatokisan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena isika. Efa nahavita dingana lehibe ( nandray Frankofonia, Comesa, sns…)Efa fongana tsikelikely ny mpanondrana andramena ( tra-tehaka ny sambo sy ny hazo sarobidy saika haondrana). Efa tsy mahazo vahana intsony ny zatra mpanao lalan-dririnina, hany ka ry zareo indray no be vava sy mijoro ho fahavalon’izao fitondrana manarina ny hadalana napetrany izao. Ka ny olona namotika ny firenena tahaka izany ve no tokony mbola haverina hamotika fanindroany ity tanindrazana iombonana ity ?